Imiba Phakathi empuma
Incwadi yaseBrithani eye yabangela ukuphikisana okuqhubekayo
Imibhalo embalwa kwimbali yeMpuma Ephakathi yaye yaba nefuthe kunye nefuthe njengeSibhengezo saseBalfour sika -1917, esiye siphakathi kwimbambano ye-Arab-Israel ngokusekwa kwelizwe lamaYuda ePalestina.
Isibhengezo saseBalfour sasisigama samazwi angama-67 equlethwe kwileta emfutshane ebhalwe nguNkosi Arthur Balfour, unobhala waseBrithani wangaphandle, ngo-Novemba 2, 1917.
UBalfour ubhekiselele incwadi eya kuLionel Walter Rothschild, uBharon Rothschild, uBhange waseBrithani, isazi sezilwanyana kunye ne-Zionist activist, kunye neZionists uChaim Weizmann kunye noNahum Sokolow, bancedisa ukuyila ivakalisi nje ngokuba ngababukeli bee-lobbyists namhlanje baqulunqa iindleko zee-legislators ukuba zingenise. Esi simemezelo sasihambelana neenkokeli zaseYurophu zeZionist kunye netyhilo yelizwe lakubo ePalestine, ababekholelwa ukuba zaziza kubakho ukufudukela kwamanye amazwe kumaYuda kwiPalestina.
Isitatimende sifundwa ngale ndlela:
Umbono kaRhulumente wobukumkani ngokuthanda ukusekwa ePalestina yendlu kazwelonke yabantu bamaYuda, kwaye baya kusebenzisa imizamo yabo engcono yokuququzelela ukufezekisa le nto, ukuba kuqondwa ngokucacileyo ukuba akukho nto enokuthi yenzelwe eyona nto ingabangela ukuba kubekho amalungelo abantu kwimihlali engekho yamaYuda ePalestine, okanye amalungelo kunye nezopolitiko ezifunyanwa amaYuda nakweliphi na ilizwe.
Kwakuyiminyaka engama-31 emva kwaloo leta, nokuba unqwenela nguRhulumente waseBrithani okanye kungekhona, ukuba ilizwe likaSirayeli lasekwa ngo-1948.
Inkululeko yeBritish yeBritani yeZiyonism
UBalfour wayeyinxalenye yombuso wenkululeko ka-UNdunankulu uDavid Lloyd George. Umbono waseburhulumenteni waseBritani ukholelwa ukuba amaYuda ayexhatshazwe ngokungekho sikweni, ukuba iWest yayikusola kwaye iWest inexanduva lokunika ilizwe lamaYuda.
Ukuxhaswa kwelizwe lakwaYuda lalincedwa, eBrithani nakwezinye iindawo, ngamaKristu angundoqo awakhuthaza ukufuduka kwamaYuda njengendlela enye yokufezekisa iinjongo ezimbini: ukuchitha iYurophu yamaYuda kunye nokuzalisekisa isiprofeto seBhayibhile. AmaKristu ase-Fundamentalist akholelwa ukuba ukubuya kukaKristu kulandelwe ubukumkani bamaYuda kwiLizwe elingcwele ).
Isibhengezo sasinokuphikisana ukususela ekuqaleni, kwaye ngokuyinhloko ngenxa yegama elingaqondakaliyo nelingqubuzanayo. Ukungaqiniseki kunye nokuphikisana kwakukho ngamabomu-into yokuba uLloyd George akazange afune ukubekwa kwinqanaba lama-Arab kunye namaYuda asePalestine.
Isibhengezo asizange sibhekiselele ePalestina njengesiza "selizwe" lamaYuda, kodwa elo "lizwe" lamaYuda. Ukushiya ukuzinikela kweBrithani kwisizwe esizimeleyo samaYuda sivulekile kakhulu ukubuza imibuzo. Loo kuvulwa kwaqhutyelwa ngabaguquleli abaza emva koko, ababethetha ukuba akuzange kuhloswe ukuba kubekwe imvume yombuso oqhelekileyo wamaYuda. Kunoko, amaYuda aya kuseka ilizwe lasePalestine kunye nePalestina kunye namanye amaArabhu asekwe apho malunga namawaka amabini.
Inxalenye yesibini yesibhengezo-ukuba "akukho nto enokuthi yenzelwe eyona inokuthi ingabonakali amalungelo oluntu kunye nolunqulo lwabantu abangewona amaYuda" -kuya kuba kwaye ifundwe ngama-Arabhu njengendlela yokugunyazwa kwe-Arabhu kunye namalungelo, ukuvuma ivumelekile njengokuba iprofiyelwe egameni lamaYuda.
IBritani, ngokwenene, yayiyayisebenzisa igunya layo leLigan of Nations phezu kwePalestina ukukhusela amalungelo aseArabhu, ngamanye amaxesha ngeendleko zamaYuda. Indima yaseBrithani ayisoze yayeka ukuphikisana.
Amanani asePalestina Ngaphambi nangemva kweBalfour
Ngexesha lokubhengezwa ngo-1917, iPalestina-eyayiyindawo "engeyona yamaYuda ePalestine" -i-90 ekhulwini lwabantu base-Palestine. AmaYuda awabala malunga nama-50,000. Ngomnyaka we-1947, ngexesha lokubhengezwa kukaSirayeli lokuzimela, amaYuda ayebalwa ngama-600,000. Ngelo xesha amaYuda ayekhupha amaziko amancinci angama-quasi-rhu lumente ngelixa enza ukuba abantu basePalestina baxhathise.
AmaPalestina aqhubela ukuvukela amancinci ngo-1920, 1921, ngo-1929 no-1933, kunye nokuvukela okukhulu, okwakuthiwa yiPalestine Arab Revolt, ukususela ngo-1936 ukuya ku-1939. Bonke baqhawulwa yintlangano yaseBrithani, kwaqala ngo-1930, amabutho amaYuda.
Imeko ekhoyo kwaSirayeli
Impembelelo ye-Arab Spring kuMbindi Mpuma
Indlela i-Spring Spring eyaqala ngayo
Iinkcukacha ngokukhawuleza kwi Burj Dubai / Burj Khalifa
Imeko ekhoyo e-Iraq
I-Saudi Arabia kunye novuko lwaseSiriya
Funda Indlela Yokuthetha Ngokuchanekileyo kwi-Restaurant kwiJapan
Iingxaki - Ukuqonda indawo yendawo